Japana: toerana izay tsy ekena mihitsy ny fialan-tsasatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2010 8:32 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, বাংলা, polski, 繁體中文, 简体中文, Español, srpski, 한국어, русский, English
Mitsotsotra malaindaina eo ambanin'ny alokaloky ny elo eny amoron-dranomasina, ho mpizahantany ary hitsangatsangana mitety ny lalàn'ny tanàna mbola tsy naleha miaraka amin'ny boky mpitari-dalana eny an-tanana, na hoe maka aina ao an-trano tsotra izao manararaotra ny fotoana malalaka. Fomba fialan-tsasatra mahazatra angamba ireo, saingy, Japoney maro no mihamanadino izany isan-taona ka tsy mahalala (manararaotra) ny andro vitsy mba tsy hiasana.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Expedia Japan izay nijery akaiky ny ‘tsy fahafahana miala sasatra [ja] ao amin'ireo firenena mandroso 11, manana 7.9 andro tsy iasana fotsiny isan-taona ireo mpiasa Japoney. Japana, miaraka amin'ny salan'isa-na tambin-karama 15 andro tsy iasana fa andraisan-karama isan- taona, no firenena vitsy andro tsy iasana indrindra andoavan-karama aorian'i Etazonia. Na izany aza, voalohany izy amin'ny tsy fandehanana miala sasatra .
Lazaina ho isan'ireo antony mahatonga izany ny tsindry hazo lena sy ny tebiteby noho ny krizy ara-toe-karena sy ny tontolo iainan'ny asa izay olona vitsy ihany no sahy manapaka amin'ny asany mba hialana amin'ny ” fanelingelenana ireo mpiara-miasa aminy ” amin'ny fampitomboana ny anjara asan'izy ireo .
Soso-kevitra hanoloana ny hafatra taloha hoe TSY ATO AMPIASANA. Avy amin'i Luis Gosalbez. Fahazoan-dalana CC
Mizara ny traikefany [ja] ny lehilahy mpandraharaha tsy mitonona anarana iray ao amin'i Hatenalabo noho izy mitana andraikitra sy fahefana ambony amin'ny famelana ireo tanora mpiara-miasa aminy hiala sasatra . Avy amin'ireo mpanapa-kevitra no midina hatrany amin'ireo lehiben'ny sampan-draharaha kely indrindra, tsy misy olona te-ho tompon'andraikitra amin'ny “fanekena” mpiara-miasa hahazo andro tsy iasana izay zony voasoratra ao amin'ny fifanekena. Tsy maka ny fotoam-pialan-tsasatra ireo mpiara-miasa efa tranainy noho izany tsy manao izany koa ireo vaovao. Izay no fanao !
Nanontany ahy ny tovolahy iray izay vao niditra tao am-piasana vao 6 volana: “Te hiaraka amin'ny namako vitsivitsy aho amin'iry volana ambony iry ka afaka maka herinandro tsy iasana ve izaho ?”
“Tsy lasa mihitsy raha herinandro, tokony ho azonao izany !” hoy aho, raha mihoa-pefy ny fanontaniany. Nijery ahy tamin'ny endrika malahelo sy matahotra izy. Tokony ho niteny mora taminy aho . […] Tsy misy lamina hafa ankoatra izay ary tsy hoe izaho no tsy te hanome azy fotoam-pialan-tsasatra , fa dia hoe tsy fomban'ny orinasa fotsiny izany. Voalohany, toy izany ny tontolo iainana ao am-piasana ka tsy misy maka ireo andro tsy fiasana nefa andraisan-karama mihitsy ny tsirairay. Nihaino ny resaka nifanaovanay ihany koa ireo mitana ny toerana ambony sy ireo mpiara-miasa manodidina . Tsy afaka nanaiky mihitsy aho. Aza milaza zavatra toy izany …
Manana rafitra mikasika ny andro tsy iasana izahay nefa tsy ampiharina mihitsy ary koa mampiditra fanamelohan-tena tsikelikely momba izany. Tsara kokoa aza ny tsy manana rafitra mihitsy..
Naneho ihany koa ny fanadihadiana vao haingana hafa nomen'i Ipsos sy Reuters mikasika ireo firenena 24 maneran-tany fa 33 % amin'ny mpiasa Japoney no misafidy ny hampiasa ireo zony. I Frantsa no voalohany miaraka amin'ny taha 89% .
Miaiky [ja] i Sasa, lehilahy mpandraharaha iray ,fa ao amin'ny orinasany ihany koa, mandinika tsara aloha ny olona mialoha ny hangataka andro vitsivitsy tsy iasana satria mety tsy hahafaly ny mpiara-miasa aminy izy ireo .
Zava-misy eo amin'ny tontolo iainako ihany koa ny tsy fampiharana ny andro ialan-tsasatra. Tena toy izany ny rivotra iainanao ao ka tsy afaka ny haka izany mihitsy ianao .
Resahin'ny olona amin'ny fomba fiteny manome tsiny hoe “Ahoana? handeha hody sahady ve ianao amin'izao fotoana izao ?”, na dia efa niezaka ny hiala amin'ny lera firavana ara-dalàna aza ianao mba tsy hanao asa mihoatra ny ora tokony ho izy.
Manery ireo mpiasa ny fakana congé rehefa marary izy ireo ny tsy fisian'ny lalàna mikasika ny tsy fiasana rehefa marary any Japana . Iray amin'ireo antony mahatonga ny olona maro hisafidy kokoa ny tsy hanapitra ny congé-ny miangona fandrao tsy misy intsony izany rehefa marary izy ireo.
Tsy mitsitsy ny rafitry ny asa Japoney i H.N., vahiny Japoney izay manana bilaogy nantsoina mazava tsara hoe kusoshigoto “asa mandreraka ”, ary manakiana izany izy [ja] na ny tsy fisian'ny lalàna avy amin'ny governemanta na ny fampidirana tsikelikely ny fanamelohan-tena sy ny tsindry hazo lena ara-tsosialy .
Amin'ny fo tsotra, mbola tsy naheno mikasika ny firenena izay tsy manana tombatombana amin'ny andro tsy iasana fa marary aho ! Indrindra, i Japana izay manezaka ny ho lasa tany mandroso ary iray amin'ireo manana fahefana ara-toe-karena matanjaka indrindra, no tsy manana lalàna mifehy ireo zo amin'ny andro tsy iasana . Ho esorina amin'ny andro fakan'aina-anao ny andro izay tsy iasanao raha toa ianao ka marary, tsy tena ratsy be ve izany? Lavitra ny maha-olana mandeha irery azy, orinasa mandreraka , izany no olan'ny kolotsain'ny tany be mpandraharaha be hambo .
Milaza ve ry zareo fa tsy misy ny olana ara-tsosialy mifandray amin'ireo fepetra mikasika ny asa toy ny fahakiviana noho ny aretin-tsaina na ny fahafatesana noho ny asa be loatra ary ireo famonoan-tena ( olana izay tsy mbola hita soritra tany amin'ireo tany hafa) ? ” Anisan'ny olana rehetra amin'ity rafitra mandreraka ity ireo izay eo amin'ny fitantanana ka manery ny olona hiasa mandra-pahavitan'izy ireo ny asa farany ka zara raha hahatratrarany ny lamasinina farany hodiana nefa mbola sahin'izy ireo ihany no miteny ” fa isan'ny asa ny fanaraha-maso ara-pahasalamana” .
Manohy ny filazana ity olana ity ihany i H.N. ary manontany [ja] ny soatoavin'ny asa Japoney izy .
本来、仕事は生活するための手段に過ぎないのに、日本ではいつの間にか仕事自体が目的になってしまっているんだよな。諸外国では当たり前のmiasa mba ho velona （生きるために働く）の価値観が、velona mba hiasa （働くために生きる）にすり替わってるんだから。
Na dia fomba ahafahana miaina foana aza ny asa, hitan'ireo vahoaka Zaponey toy fiafarana mihitsy ny asa ankehitriny. Raha “miasa mba ho velona” ny olona any amin'ny tany hafa tsirairay, ny mifanohitra amin'izany mihitsy ny fanao any Japana, toy ny hoe “velona mba hiasa ” izy ireo ”.